गुल्मी शान्तिपुरमा अशान्ति : सम्धी-सम्धिनी, सासू-बुहारी बीच भिडन्त ! – ebaglung.com
२०७४ चैत्र २९, बिहीबार १९:१९	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७४ चैत २९ । गुल्मीको शान्तिपुरमा आफ्नै सम्धीको दादागिरीबाट सम्धिना असुरक्षित भएकी छन् । गएराति चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्वर ४ शान्तिपुर बजारकी ५३ वर्षिया एकल महिला रहेकी सम्धिनी धनकुमारी थापालाई सोही वजारका सम्धी थम्मनबहादुर बुढाथोकीले हातपात गरेका छन् ।
दिनभरी माईती घर बसेर साँझ करिव ८ वजेको समयमा घर आएकी बुहारी सुमिना थापाले ढोका बन्द गरेर सुतेकी सासूलाई लात्तीले ढोका हानी खोलेको र पछि बाबुलाई फोन गरेर बोलाए पछि सम्धीनालाई जगल्टाउँदै बाहिर निकाली लात्ती मुड्कीले निर्घात कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शी मायाँ रायमाझीले बताईन् ।
उनले भनिन–‘ एक्लै सुतेकी एकल महिला थापालाई उनका सम्धीले कपाल जगल्टाउँदै भुँईमा ढलाएर लात्ती मुड्कीले कुटेको हामीले नै देखेका हौं , मार्न खोजेको हो ? भनेर हामी कराउन थाले पछि छाडेर हिडेका हुन् ।’
संसाँझै वजारमा एकल महिला माथी हातपात हुँदा असुरिक्षत महशुस गरेका छौं । पिट्ने व्यक्ति शान्तिपुरका समाज सेवी हुन, उनले थपिन समाजसेवीबाटै अशान्ति मच्चाउन पाईन्छ ? आज विहान शान्तिपुर प्रहरीले शान्ति कायम गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
तर दिउँसो घाईते थापाको त्यहाँ उपचार हुन नसकी बुटवल रिफर गरेको बताईन्छ । यस सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक डाक्टरप्रसाद चौधरी संग सम्पर्क राख्दा छलफल कै क्रममा घाईतेलाई बुटवल रिफर गरिएको जानकारी दिए । उपचार गरी घाईते महिला फर्किए पछि जिल्लामा उजरी दिएमा कानुन अनुसार कार्वाही प्रकृया अगाडी बढाईने छ’–
छोरीको ज्यान जोगाउन गएको हुँः बुढाथोकी
कुटपिट आरोपी बुढाथोकी संग सम्पर्क राख्दा आफु सम्धीनीलाई कुटन नगएको उहाँले बुहारी अर्थात मेरी छोरीलाई गाली बेईजती र कुटपिट गरेको थाहा पाए पछि छोरीको ज्यान जोगाउन पुगेको जिकीर गरे ।
उनले भने–‘छोरी माईतबाट साँझ सुत्न घर गएकी थिईन । उहाँले तेरा वाउ आमाले खान दिएनन् र ? भन्दै वाउ चकारी चकारी गाली गर्दै ढोका खोल्न मान्नु भएन छ । छोरीले मुस्किलले ढोका खोलेर माथी आफ्नो तलामा जान खोज्दा उहाँले लछार पछार गर्नु भए छ , छोरीले रुँदै फोन गरे पछि म त्यहाँ पुगेको हुँ । म पुग्दा सम्धीनीले मेरी छोरीको गला अठ्याई रहनु भएको थियो । मैले छुटाएर वाहिर ल्याएको मात्र हुँ त्यसरी कुटेको होईन । छोरी छुट्टिएर बसेकी छन् । ज्वाई विदेश हुनुहुन्छ ।’
साूुको सधैको कचकचले छोरी सधै पीडित छन् । उहाँले अंश समेत नदिएर ज्वाईले मुद्दा दिनु भएको छ उहाँले पनि त्यसरी अन्याय गर्न त पाईएन नि ? उनले थपे–‘ उहाँ उपचार गरेर फर्किए पछि छmलफल गरेर मेलमिलापको प्रयास गरिने छ ।’
आजको तस्वीर : महोत्सव भन्दा कम थिएन बिदाई !